DEG DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo baaq deg deg ah u diray shacabka Soomaaliyeed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo baaq deg deg ah u diray shacabka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa goordhaw ku dhawaaqay in maalinta Talaadada ee soo socoto la qaban doonno salaad roob doon ah, isagoona shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qeyb qaataan.
Madaxweyne Farmaajo oo goordhaw shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in Alle barri ku dhaqaaqaan, isagoona maalinta Talaadada ah ee soo socota u asteeyay in guud ahaa dadka Soomaaliyeed ay isugu soo baxaan salaada roob doonka ah.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday dadka Soomaaliyeed in maalinta 14-ka bishaan Maarso ay si mideeysan Alle u wada baryaan, si uu uga dul qaado abaarta ku raagtay Soomaaliya.
Baaqaan kasoo yeeray madaxweyne Farmaajo ayaa yimid kadib markii guddiga abaaraha dalka iyo culimadda Soomaaliyeed ay horey dadka ugu baaqeen in muddo seddax maalmood ah ay soomaan, waxaana seddaxdaasi maalmood xiggi doonta sida ay culimada sheegeen isku soo bax roob doon ah oo hal maalin socon doonna.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta Talaadada ah islamarkaana ay taariikhdu ku beegan tahay 14-ka bishaan Maarso ayaa la filayaaa in qeybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya ay isugu soo baxaan shacabka Soomaaliyeed, si Alle ay uga baryaan inuu abaarta ka dul-qaado.